हेड सरको पुस्तक: कक्षमै पढिरहेको जस्तो
महासंघमा चार वर्ष १ महिना जीवन लामा
वाद मध्येको जर्वजस्त वाद आर्शिवाद जानुका न्यौपाने
महासंघमा महिला नेतृत्व कहिले ? उषा तामाङ
विश्व पर्यटन दिवस र दोलखाका पर्यटकीय स्थल जीवन लामा
दोलखामा नयाँ सिडियो: आशा सँगै आशंका पनि रमेश खतीवडा
स्वास्थ्यकर्मीलाई अपमान हैन सम्मान गरौं शिबकुमार भुजेल
महासंघमा चार वर्ष १ महिना
हुराडेकले मनायो २९ औं स्थापना दिवस
बैगुनीमा लिएर आए दोलखाली कलाकार रामबाबु (भिडियोसहित)
जीवन लामा मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
कात्तिक १ गते यज्ञराज ढुंगेलको पुस्तक विमोचन भयो । विमोचनपश्चात सांसद पशुपति चौलागाईले पुस्तक विमोचनको केही कुराहरु समेटिएर फोटो पोष्ट गर्नुभएको थियो । कहिले हात पार्ला र मज्जाले पढुँला जस्तो लागेको थियो । मलाई पुस्तकको नाम सुन्न्ने वित्तिकै मन तानेको थियो । काठमाडौबाट चरिकोट आउने धेरैलाई हेड सर लिएर आउनुस है भने । तर, बजारमा नपाईने रहेछ भन्ने जवाफ धेरैले दिनुभयो ।
कात्तिक १७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई बधाई दिन काठमाडौ पुगेको बेला नियमित पुस्तक किन्ने पसलतिर सोधें । कतै पनि पाइएन हेड सर । १८ गते बिहान पशुपति चौलागाई दाईसँग भेट्ने समय मिलाएको थिए । बिहान तीनकुने स्थित इन्द्रेणीमा भेटघाट भयो । उहाँ विमोचनको दिन कार्यक्रममा पुगेको हुनाले पक्कै उहाँसँग एकप्रति होला भन्ने लाग्यो । उहाँलाई भेटमा पुस्तक पनि ल्याईदिन आग्रह गरेको थिएँ । ल्याउनु भएछ । किताब पल्ट्याउदै केही अंशहरु देखाउनु भयो । झन मनमा कौतुहलता छायो । कतिबेला लगेर पढुँ भनेर । मेरो बानी एक्लै बसेर पढ्नु पर्छ । त्यसैले उहाँसँग छुटेपछि म आफ्नो काममा लागे ।
यसबीचमा मसँग पढ्न बाँकी धेरै पुस्तकहरु थिए । हेड सर हात पार्नुभन्दा पहिलानै अरु पुस्तकको पालो आएको थियो पढ्नलाई । मलाई प्रत्येक शब्द शब्द केलाउनु पर्छ पढ्ने बेला । त्यही बानीले अलि ढिलानै पालो पायो हेड सरले । फेरी घान हालेपछि मेलो सिध्याउन पर्छ । यही बानीले बिस्तारै घान हालौला भन्ने लागेको थियो । तर, एकदिन पशुपति दाईले कस्तो लाग्यो त पुस्तक भनेर सोध्नु भयो । म अलमलिए । ढाँट्ने कि सत्य बोल्ने भनेर । किन कि मैले पढ्न सुरुनै गरेको थिएन । त्यसैले पालो मिचेरै हेड सरलाई प्राथमिकता दिए ।
यज्ञराज ढुंगेल दोलखालीको लागि नौलो नाम होईन । मैले त अझ सहकारी अभियन्ता भनेर चिनेको÷सुनेको धेरै पटक भयो । उहाँलाई कालिञ्चोक एफएमले बहसमुखी कार्यक्रम नागरिक बहसमा एकपटक मात्र ल्याउन सक्यौ । उहाँको सहकारीप्रतिको बुझाई, बुझाउने क्षमता र शैलीले पटक पटक ल्याउने मन थियो । तर, उहाँको समय ?
मेरो मन तान्ने पुस्तकभित्र पर्दछ हेड सर । बेस्ट सेलर पुस्तक र पब्लिक फिगरका पुस्तकहरु धेरै पढेको छु । मेरा लागि त्यहीमध्येको पर्दछ हेड सर पनि । सोचेको थिईन यति बिग्न मन तान्छ भनेर । तर, उहाँको लेखनले मलाई पनि सँगसँगै डोर्यायो । कहिले काठमाडौको डेरामा । कहिले जनसचेतन साकोसको कार्यालयमा त कहिले बैतेश्वर मावि नाम्दूमा ।
पुस्तक पढेर साथीहरुसँग गफ दिन्थे । कति कुराहरु आफ्नै जीवनमा लागू गर्ने कोशिस गर्थे तर हेड सरले मलाई कक्षमा पढाईरहेको भान भयो । म शिक्षक गुरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्नेमा पर्दछ । जहिले पनि आदर, सम्मान गर्दछु शिक्षक गुरुलाई । हेड सर पढ्दा पनि मैले मेरै विद्यार्थी जीवनलाई सम्झे । कति ठाउँमा झस्के पनि । बाल्यकालको त झनै कुरा नगरौ ।
यज्ञराज ढुंगेलको आत्मवृत्तान्त हरेक शिक्षक, विद्यार्थी, सहकर्मी, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ताले पढ्न जरुरी देखें । अहिले समाजसेवाको नाममा विकृति फैलिएको छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो भूमिका बिर्सेका छन् । कमाउ धन्दामा लागेका छन् । इमानदारीता र अनुशासनको पाठ बिर्सेका छन् । तर, यस पुस्तकले कताकता झस्काउछ कि ? तसर्थ हेड सर नपढे तापनि प्रत्येक विद्यालय, सहकारी, पार्टी कार्यालयको पुस्तकालयमा सजिन आवश्यक छ ।
पुस्तकमा व्यक्तिगत अनुभव, शिक्षा, राजनीति, सहकारीको विषयमा धेरै ज्ञानवद्र्धक भेटें । पाठकको नजरमा हेड सरलाई केलाउदा प्रत्येक शब्द शब्दमा भिजेको महशुस भयो । कुनै पाना छोड्न मेरो मन मानेन । सुरुदेखि अन्तसम्म सबै केलाए । पुस्तकको विषय वस्तुसँग धेरबहुत म पनि भिजेको छु । हल्का ज्ञान भएकाले पढ्दा मज्जा आयो । आफ्नै विद्यालय, सहकारी, पार्टी सम्झे । उहाँले उठाएका राम्रा र सुधारात्मक विषय वस्तुहरु हुबहु मिल्छनै । उहाँको व्यक्तिगत अनुभवहरु पनि कोर्ष जस्तै लाग्यो । तालिमनै सम्झे ।
मलाई लागेको थिएन कि पशुपति चौलागाई, आनन्द पोखरेलको पनि शिक्षा, राजनीतिको गुरु भनेर । उहाँ त दोलखाकै गुरु सम्झे । हाम्रा बानी, संस्कार मरेपछि सम्मान दिने गर्छन । वयान गर्ने गर्छन । तर, जिउँदो हुँदा खराब बाहेक केही देख्दैनौ । यज्ञराज ढंगेलले चालेका कदमहरुमा किन अहिलेसम्म साथ नदिएका होलान । उहाँ जस्ता सक्षम, दक्षता, क्षमतावान व्यक्तिले किन अहिलेसम्म कहीकतै अवसर नपाएको हो त ? अवसर दिनको लागि के गुट मिल्नुनै पर्छ र ? चाकरी, चाप्लुसी नपुगेकै हो त ? आफ्नो मान्छेनै चाहिन्छ र ? मलाई पनि उहाँले उठाएका केही गुनासोमा यस्तै यस्तै लाग्यो । हाम्रो समाज अहिले पनि कता कता बाटो बिराउन थालेको हो कि ? समाज झुलेको हो कि ? होईन भने स्वच्छ र सभ्य समाज पाउन गाह्रो छ ।
सहकारीको गुरु । शिक्षाको गुरु भनेर संसारले चिनेका छन् यज्ञराज ढुंगेललाई । सिङ्गो मुलूक परिवर्तन गर्न नसके तापनि टोल, गाउँ परिवर्तन गरेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा लागेका छन् । खल्तीको पैसा खर्च गरेका छन् । समाजको लागि चुनौती भोगेका छन् । तर, कताकता गुनासोको पोका धेरै देखें । कतिपय बाह्यमुलुकमा ४० वर्ष कटेपछि अनुभवको आधारमा ब्याचलर ठान्छन रे । यज्ञराज ढुंगेलले ७४ वर्ष पुगेका छन् । उहाँको अनुभवले एउटा पुस्तक बन्छ । पाठ्यक्रम निर्माण हुन्छ । सबै क्षेत्रका मान्छेलाई उहाँको पुस्तक एउटा गाईडको रुपमा लिन सकिन्छ ।
सबै पढें । धेरै कुरा लेखौला भन्ने सम्झेको थिए । तर, पाठकलाई ध्यानमा राखेर छोटो कुराहरु मात्र समेट्ने कोशिस गरे । आगे अहिलेलाई यति ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ९, २०७७, १५:२५:००
आईतबार, चैत २९, २०७७, १३:१५:०० बैगुनीमा लिएर आए दोलखाली कलाकार रामबाबु (भिडियोसहित)
आईतबार, चैत २९, २०७७, ११:४६:०० महासंघमा चार वर्ष १ महिना
मंगलबार, चैत २४, २०७७, ०७:४७:०० हुराडेकले मनायो २९ औं स्थापना दिवस
आईतबार, चैत २२, २०७७, २१:५७:०० जनसचेतन कपको उपाधी कालिढुङ्गा र हनुमन्तेश्वरलाई
शुक्रबार, चैत २०, २०७७, १६:३८:०० पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेश सचिवका लागि प्रकाशक लामाको उम्मेद्धारी
शुक्रबार, चैत २०, २०७७, १६:१५:०० सहकारी दिबसको अवसरमा दोलखामा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न
बैगुनीमा लिएर आए दोलखाली कलाकार रामबाबु (भिडियोसहित) (भिडियोसहित)
पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेश सचिवका लागि प्रकाशक लामाको उम्मेद्धारी
सहकारी दिबसको अवसरमा दोलखामा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न
सहकारी दिवसको अवसरमा जनसचेतनद्धारा रक्तदान सम्पन्न
समुदायमा आधारित खोज तथा उद्धार तालिम सम्पन्न
डाँडाखर्क माविमा स्वर्गीय हरिशंकर उपाध्यायको सम्झनामा अक्षकोष स्थापना
समुदाय स्तरमै तयार हुँदै उद्धारकर्मी
बालबालिका सम्वन्धि ऐन स्थानीय तहमा कार्यन्वयनका लागि प्रतिवद्धता
जनसचेतनको सहकारी शिक्षा शिविर सम्पन्न
सहकारी दिबसको अवसरमा दोलखामा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न इ दैनिक सहकर्मी
सहकारी दिवसको अवसरमा जनसचेतनद्धारा रक्तदान सम्पन्न इ दैनिक सहकर्मी
जनसचेतनको सहकारी शिक्षा शिविर सम्पन्न सन्तोष भुजेल
सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई नागरिक समाजद्धारा सहयोग संकलन इ दैनिक सहकर्मी
उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्न जीवन लामा
सहकारीमध्ये फरक पहिचान सारथी इ दैनिक सहकर्मी
सहकारी शिक्षा तथा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न इ दैनिक सहकर्मी
जन्मदिनको अवसरमा पत्रकार महासंघलाई सहयोग इ दैनिक सहकर्मी
म्यानचेष्टर युनाइटेडविरुद्ध पुनरागमन जितसहित सेभिया युरोपा लिगको फाइनलमा
© इदैनिक खबर. -2021 All rights reserved. Site by: SoftNEP